Paris, ficilka 23 "jeexa jaalaha ah" wuxuu bilaabmaa xasiloon - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Paris, ficil 23 ee« jaallo jaalaha ah »waxay bilaabmaysaa xasillooni
"Jeexa jaalaha ah" ayaa la siiyay ballan ah Sabtidii 20 April ee Paris iyo magaalooyin kale oo Faransiis ah oo loogu talagalay ficilada 23 ee ay ku abaabulayaan, waxay ku dhawaaqeen "cusub" ah Emmanuel Macron.
Ugu yaraan 2 000 "jeex jaalaha ah" ayaa Sabtidan ka hor soo horjeeday Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Maaliyadda ee Bercy, oo ah 26-kii illaa saddexda hawleheedkooda. Jawigu waa uu fiicnaa. Calaamadaha iyo hadalkoodaba, qaar ayaa ku qaylinaya Notre-Dame de Paris, oo ay dab qabadsiiyeen Isniintii iyo wixii deeq ah ee ay kufilanayeen. "Macruufkayaga Faransiiska" waxaa laga akhrisan karaa kartoon. Ka dib laba saacadood oo sugitaanka samada iftiin leh, naadiga ayaa si degdeg ah ugu duulay Place de la Bastille.
Xoogaa 60 000 waxaa lagu wareejiyay Faransiis, oo ay ku jiraan in ka badan 5 000 ee Paris. Wasiirka Arrimaha Faransiiska Faransiiska Christophe Castaner ayaa sheegay in maalinta ka horeysa ay ka baqayaan in ay yimaadaan arrimo rabshado wata, gaar ahaan caasimadda. " Sida laga soo xigtay xogta aan hadda hayno, ayuu ku yiri shir saxaafadeed. Baabuurtu waxay noqon doonaan berrito, magaalooyinka qaarkood ee Faransiiska, gaar ahaan Paris. »
"Jeexyaha Jaalaha" ayaa lagu dhawaaqay saddex toddobaad oo ah abaabul wax ku ool ah iyo labaad " ballantaas Emmanuel Macron. Xaqiiqdii waxay abaabushay 16 Maarso, ka dib markii la xidhay doodii weynaa. On shabakadaha bulshada, codka ayaa la aqbalay ayaa waqtigan udambeeyay, xitaa hanjabaad. On Facebook, dhacdooyinka ugu caansan ee federaalka ah ee ku dhow dhow 6 000 ayaa loogu yeeray inay tagaan Paris si ay « nabadgelyo la'aan ".
Isha laga soo xigtay: http://www.rfi.fr/france/20190420-acte-23-gilets-jaunes-ultimatum-paris
Ciraaq waxay wadahadal la leedahay deriska si ay u xasiliyaan gobolka
boqolaal dhalinyaro ah ayaa ku jira liiska doorashada